साथिहरु मिलेर घुम्न जादा भएको दुर्घटना दोशीलाई कारबाही हुनुपर्छ . – Sabaikoaawaj.com
साथिहरु मिलेर घुम्न जादा भएको दुर्घटना दोशीलाई कारबाही हुनुपर्छ .
बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ 7:13:25 PM	मा प्रकाशित
पोखरा ४ फागुण / माघ १० गते साथिहरु लेकसाईड घुमेर ९ः ३० र्फकदा लेकसाईड छ फिस्टेल गेट अगाडी सागर त्रिपाठीको मोटरसाईकल दुर्घटनामा गम्भीर घाईते भएका थिए ।
दुर्घटनामा सागर त्रिपाठीको मोटरसाईकलले सागर आचार्यको मोटरसाईकलमा ठोकीएर सुशील गुरुङको मोटरसाईकलको अगाडीको पाङ्ग्रामा गएर सागर त्रिपाठी घाईते भएका थिए । दुर्घटनामा परी सागर गीरीको करङले कलेजोमा असर पारेको छ । यस दुर्घटना अनुसंधानको लागि आफु दासी नहुँदा पनि नौ दिनसम्म प्रहरी कार्यलयमा राखेका थिए । सागर आचार्यले दोशी नभएको बिना कारण आफुलाई थुनिएको बताएका छन ।
उनले म्याद नथपी आफुलाई राखेको घरमा फोन गर्न ब्यवस्था समेत नरारीदिएको उनको भनाई छ । उनले आफ्नो मोटरसाईकलमा ठक्कर नखाएको बताए । उनले गल्ती नहुदा पनि दोशीको आरोप बताएका छन । तर शुसील गुरुङले भने अर्को मोटर साईकलबाट बाट हुत्तिएर आएर आफ्नो मोटरसाईकलमा रङ साईडमा आएर ठोकीएको बताए । मोटरसाईकलमा ठोकीएको आफ्नो गल्ती नभएको बताएका छन । गुरुङले भने मेरो गल्ती पनि छैन म दोसी पनि हैन मानवताको नाताले गर्दा आफुले सहयोग गरेको हु । उक्त दुर्घटनाबाट सबैजना पन्छीन खोजेको सागर त्रिपाठीका मामा मिलन ढकालले बताए ।
उनले जो दोसी भएतापनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन । उनले भने आफै घटना भएको होईन जे जस्पतो बाध्यता परेपनि अगाडी बढछु न्याय सबैले पाउनुपर्छ । पोखरामा उपचार उपयुक्त नभएर काठण्माडौँ लगेर उपचार गरेको ढकालले बताए । ढकालले घटनाको छनबिनामा सम्पुर्ण मानिसहरु उपस्थित नभएको बताए । घटना हुने बेलमा नबराज अधिकारी सागार आचार्यको मोटरसाईकलको पछाडी थिए भने सुनिल गुरुङको पछाडी राजकुमार गुरुङ थिए । मिलन परीयार सागर त्रिपाठीको पछाडी रहेका थिए । बैदाम प्रहरी कार्यलयले जिल्लामा गएर मिल्न अनुरोध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले भने बैदाम कार्यालय बाट बुधबार मिल्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ 7:13:25 PM